EasyWMA u Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > EasyWMA u Mac
EasyWMA siisaa hab xarrago leh iyo user-friendly ah u isticmaala computer si loogu badalo badan oo xul ah qaabab file maqal ah. Waxaa loo qorsheeyay sida codsiga Rippers & diinta ah oo taageeraya noocyo kala duwan oo talooyin iyo file maqal ah soo saarka qaabab. Its interface sahlan oo wanaagsan aad ka dhigaysa heshiiska ay suurtagal tahay la Dufcaddii ah ee files audio ka mid yihiin WMA isku mar la soo jiitaa sahlan & dhibic.
Taageer duwanaanshaha ka mid ah qaabab audio
Iyadoo EasyWMA, waxaad ka ciyaari kartaa heeso aad jeceshahay in ciyaaryahan kasta oo ku saabsan ka dib markii diinta Macimport ASF, regelingen, vorbis ogg, flv, warbaahinta dhabta ah, shn, FLAC iyo wmv. Waxaa iyaga loogu badalo karaa in m4a, regelingen, mp3 iyo aiff. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo files sameeyo Olympus taariikhqorihii vocal, EasyWMA waa mid wax tar leh oo ku haboon iyo sidoo. Heerka yara ayaa ka jira laba nooc oo ay ka mid yihiin buugga iyo mid toos ah. Sidaas darteed, dhammaan noocyada kala audio ay qaban karaan barnaamijkan.
Easy oo deg deg ah
EasyWMA waa u fududahay in la dajiyo. Isla mar ahaantaa, Iyadoo user fudud laakiin dareen interface ka mid ah EasyWMA, waxaad heli kartaa buuxa jiitaa-iyo-hoos u isticmaalaya waayo-aragnimo. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo aad ururinta full of songs wma, waxa kaliya ee aad samaynaysaa waa in guji mid button oo u sug dhawr daqiiqadood. Its xawaaraha si dhakhso ah xaqiiqo ku yaab badan. Waxaa sidoo kale weli tayada sare ee files audio.
EasyWMA waa mid ka mid ah Rippers & diinta Software adduunka oo dhan ugu caansan oo ku habboon. Wuxuu ku siinayaa hab fudud si loogu badalo noocyo kala duwan oo ah qaabab file maqal ah, oo ay ku jiraan regelingen, shn, vorbis ogg, ASF Macimport, flv, warbaahinta dhabta ah, FLAC iyo wmv. Waxa kale oo aad ka shaqayn kartaa Dufcaddii ka mid ah heesaha WMA waqti isku mid ah ula dhowr ilbiriqsi oo aan khasaaraha ka mid ah oo tayo leh. Waxaad ka heli doontaa waxa fudud iyo user-friendly ay sabab u tahay design dareen leh. In version ugu dambeeyay, waxa ay taageertaa ID3 tags iyo isku Lugood.